Abakhiqizi Bohlelo Olukhanyayo Beer | I-China Bright Beer System Factory & Abahlinzeki
Igama lomkhiqizo: Ovundlile Okhanyayo Beer Tank Ovundlile okhanyayo amathangi kabhiya, abizwa nangokuthi amathangi wenkonzo, amathangi esiphuzo esiphothuliwe, noma ama-BBT amathangi kabhiya akhanyayo. Amathangi asebenza ngokufakwa kwe-PUR apholisiwe kusetshenziswa amanzi noma i-glycol ejikeleza ngaphakathi kwabaphindayo (iziteshi zokupholisa ngaphakathi kwejakhethi yensimbi ephindwe kabili). Amathangi aqhakazile kufanele afakelwe amakhaza futhi abambe ingcindezi, kwesinye isikhathi asebenze njenge-BBT - amathangi wokugcina ubhiya, amathangi kabhiya we-cylindrical pressure amathangi kabhiya akhanyayo akhonza i-tanki ...
Ovundlile Beer Tank
Amathangi kabhiya avundlile, abizwa nangokuthi amathangi wensiza, amathangi esiphuzo esiphothuliwe, noma amathangi kabhiya akhanyayo we-BBT. Amathangi asebenza ngokufakwa kwe-PUR apholisiwe kusetshenziswa amanzi noma i-glycol ejikeleza ngaphakathi kwabaphindayo (iziteshi zokupholisa ngaphakathi kwejakhethi yensimbi ephindwe kabili).
Igama lomkhiqizo: I-Vertical Bright Beer Tank BBT, i-Bright Beer Tanks, amathangi we-cylindrical pressure, amathangi akhonzayo, amathangi wokugcina wokubeka ubhiya, amathangi wokugcina ubhiya - lawa ngamagama avame kakhulu, kufaka phakathi isigaba esifanayo semikhumbi yengcindezi ekhethekile eyenzelwe ukulungiselela ubhiya we-carbonated ngaphambi kokufakwa ebhodleleni, ugcwalise izingodo noma ezinye iziqukathi. Ubhiya we-carbonated ohlanjululiwe udonswa kusuka kumathangi kabhiya we-lager noma amathangi e-cylindrically-conical ayifaka ethangini lobhiya lokugcina ingcindezi ngaphansi kwengcindezi efinyelela ku-3.0 bar ....
Udonga olulodwa Ithangi likabhiya elikhanyayo
Itanki elilodwa likabhiya elikhanyayo livame ukufakwa endlini yesiqandisi / ekamelweni elibandayo ukugcina ukushisa kulungiselelwa. Ngakho-ke ithangi likabhiya elikhanyayo lodonga olulodwa aludingi ukuxhuma neyunithi yokulawula kepha lifakwe i-pressure gauge, okulula ukuyisebenzisa. Uma unekamelo elibandayo lokungenzi lutho, ithangi elilodwa likabhiya elikhanyayo kungaba yisinqumo esihle kuwe.